musha nyika dzakabatana WWE Superstars Alexa Bliss Nyaya yehuduku Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeAmerican wrestler weruzhinji nezita rekudana "Lexi".
Yedu Alexa Bliss Yehucheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kweyeiye akanaka weAmerican nyanzvi wrestler kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Kunyanya zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevanonyanya kuita vakadzi vewrestling muWWE. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Alexa Bliss 'biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Alexa Bliss Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Alexa Bliss (yakabhabhatidzwa Alexis Kaufman) akaberekwa musi we9th weAugust 1991 kuColumbus muOhio, USA. Ndiye oga mwana akaberekwa naamai vake Angela Kaufman uye kuna baba vake Bob Kaufman.
Alexa Bliss vabereki Bob naAngela.
Mufaro weVacheche akaunzwa munyika nevabereki vachiri kuyaruka avo vasina kunyatsogadzirira kurera vana. Amai vake vaive 18 makore panguva iyoyo apo baba vake vaive 17.
Nekudaro, vechidiki vakatambura kuti vachinje kuva vabereki pakati pemari shoma. Kunyangwe zvakadaro, ivo vakapa Bliss akanakisa ezviitiko zvehudiki kusanganisira kumutora iye kushanya kwegore kuDisney World muFlorida.
Alexa Bliss akakura achifara seiye ega mwana wevateereri vabereki.
Kupindura, Kufara kunokura semwana anofara nevabereki vake kuColumbus uye vakaratidza zviratidzo zvekurera zvakanaka kuburikidza nekunyora kushingaira mukubatana neballball, kufamba, uyewo gymnastics kubva muzera remakore 5.
Wechidiki Gymnast, Alexa Bliss Anomira pachiyero danda.
Alexa Bliss Dzidzo:
Bliss 'Yedzidzo kana redzidzo mamiriro inosanganisira kudzidza kwake kuProvidence High Chikoro muNorth Carolina, USA. Ndichiri kuchikoro iye akasanganisa vadzidzi pamwe nemitambo uye cheerleading. Kure nechikoro, Bliss aifarira kutarisa mutsimba pamba.
Akanga ari fan of wrestling legends panguva iyoyo uye akanamata Rey Mysterio nekuti ake e-mhete maakirobheti akakurudzira kune zvaaifarira muGymnastics.
Iyo nguva inoenderana neBliss 'vechidiki vachiri kuyaruka yakamuonawo achidurura huremu hwakawanda nekuti ainzwa kusagadzikana pasi peganda rake uye aida kutaridzika kunge akakwana.
Izvi zvakamutungamira kuti awedzere matambudziko ehutano kubva pane chirwere chekudya chinozivikanwa seAnorexia. Dambudziko iri raityisa zvekuti rakazove rekutyisidzira hupenyu hwemwana ane makore gumi nemashanu panguva iyoyo.
Hutsinye asi kupora Alexa akatambura neAnorexia achiri mudiki makore ekuyaruka.
Iye, zvakadaro, akazvikunda nekugamuchira kuvaka muviri, chiitiko chakamubatsira kuti awedzere kudya kwesimba.
Kuvaka muviri shure kwaizvozvo kwakave chiitiko chakakosha cheBliss zvese kuburikidza nemazuva ese echikoro chesekondari. Akaramba akaomerera pachiitiko ichi panguva yake yedzidzo yepamusoro kuYunivhesiti yeAkron Ohio.
Alexa Bliss Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Paakapedza kudzidza kuYunivhesiti, Bliss akaenderera mberi nekuvaka muviri uye akazove mumwe wevakadzi vadiki kupihwa pro-kadhi muchiitiko ichi. Iye, zvakadaro, haana kufarira kuita basa rekuvaka muviri.
Alexa akawana pro-kadhi mukuvaka muviri pazera diki kwazvo.
Izvi zvakaita kuti mudzidzisi wake amuudze nezve hwindo rakavhurika reWWE kuyedza panguva iyoyo. Akazadzisa zvinodiwa pamhepo zvekuyedza kusanganisira kuendesa vhidhiyo yake achiratidza kufarira basa. Bliss yakazokokwa kubvunzurudzo uye pakupedzisira yakasaina kuWWE mu2013.
Alexa Bliss Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Mushure mekusainirwa neWWE, Bliss akaendeswa kunharaunda inosimudzira yekambani yemidhiya. NXT.
Ndichiri kuNXT, Bliss yakapihwa zita remhete "Alexa Bliss" uye yakasimuka kuti ive mumwe wevanotyisa vakadzi vewrestling munharaunda.
Kunyangwe Bliss isina kuhwina iyo NXT Vakadzi Chinyorwa, iye akapa vakwikwidzi nguva yakaoma uye akavamanikidza kumiganhu yavo.
Alexa Bliss Biography - Kubudirira Nhau:
Kwakazotevera kurwa kwekuedza kwakaona mufaro wakanyorwa kune iyo SmackDown brand kwaakakwira paanokunda mitsara. Panguva yepamusoro yekuhwina kwake, akakunda Becky Lynch kuti ave SmackDown Yevakadzi Chikwata muna Zvita 2016.
Alexa Bliss yakakunda Becky Lynch kuhwina iyo SmackDown uye Raw Yevakadzi Chinyorwa muna 2016.
Mwedzi yakati gare gare, Bliss akanyoreswa kuMuvhuro Husiku Raw kwaakakunda RAW Chinyorwa cheVakadzi mune imwe vhiki.
Iyo feat yakamuita iye kuti ave mukadzi wekutanga superstar kuhwina zvese zviri zviviri SmackDown uye Raw Yevakadzi Chinyorwa. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Alexa Bliss Rudo Hupenyu - Mukomana, Murume?
Bliss achiri kuzoroora. Tinokuunzira ruzivo nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye ikozvino hukama hupenyu.
Kutanga neyekufambidzana nhoroondo, hapana marekodhi eBliss 'ehupenyu hwehukama hwekare. Iye anongozivikanwa kuve achidanana nemukomana wake uye mutsimba, Matthew Adams (ane zita rechitambo, "Buddy Murphy").
Alexa Bliss naBuddy Murphy vanga vachidanana kubvira 2013.
Ivo vaviri vakasangana ndokutanga kufambidzana apo Bliss aikwikwidza kuWWE yeNXT nharaunda yekusimudzira. Vakabudirira kuchengetedza hukama hwavo pasi peiyo radar uye vanowanzo sunga banga chero nguva munguva pfupi.
Alexa Bliss Hupenyu Hwemhuri:
Kufara kwakaberekerwa mumhuri yevatatu isu tinokutaurira ruzivo rwechokwadi pamusoro pemhuri yemhuri yake.
Nezve Alexa Bliss 'Baba:
Bob Kaufman ndibaba vaBliss. Ivo baba vanozvikudza vewrestler vane akakwirira anoyevedza kukwirira kana vachienzaniswa neBliss naamai vake.
Iye anga ari wekutsigira kwakanyanya kune Bliss 'basa uye akatoisa chimiro kuTLC kubhadhara-per-maonero muAmerican Airlines Center, Dallas kuona mwanasikana wake achikunda zita revakadzi reSmackDown.
Bliss 'baba Bob vane hurefu hwakareba.
Nezve Alexa Bliss 'Amai:
Angela Kaufman ndiye Bliss amai uye vakataridzika. Angela akada Bliss zvekuti akasununguka paakaudzwa nezvewrestler's WWE vavariro.
"Mhinduro yaamai vangu chaiyo yaive, 'Iye iye ** iwe ndiwe ... Hausi kuzviita izvo.' Akafanana, 'Lexi, kune vakadzi vakaita saChyna [6-0, 180]… Lexi… Chyna. Iwe uri tsoka shanu, uye uri zana mapaundi. Unozourayiwa mumhete. '
Ndakanga ndakafanana, 'Kwete. Zvakanaka. Ndiri mutambi. Ndinozvigona. ' Ndakapokana nemashoko evabereki vangu ndikazama, uye ndinofara kuti ndakadaro. ” Akati Bliss mubvunzurudzo naMiami Herald.
Bliss 'anotaridzika amai pakutanga vakaedza kumudzivisa kubva mukurwa.
Yakanga ichingova nyaya yenguva Angela asati azvirumbidza nebasa remwanasikana wake uye akatokwazisa Bliss kumashure kumashure mushure mekunge ahwina zita revakadzi reSmackDown.
Nezve Alexa Bliss 'Vanun'una:
Bliss haina kana mukoma kana hanzvadzi yakapihwa kuti ndiye ega mwana akazvarwa kuvabereki vake.
Alexa Bliss Hupenyu hweMunhu:
Bliss ndeye 5 tsoka dzakareba tsvarakadenga ine chimiro chakanaka uye kunyemwerera kwakanaka. Zvirinani ndizvo zvinosangana neziso asi pamusoro pomuviri wake mukadzi ane hukasha uye akaomarara-pfungwa akashuva musikana musikana anga ari nyeredzi munzira dzese dzehupenyu.
Wrestler ane izwi rakanaka raakagara nhaka kubva kuna sekuru vake vaive muimbi wenyika.
Izvi pakati pehunhu hwakawanda hunokwezva hwemagineti hunhu hwakamupa ushamwari hwechigarire hwevakawanda kusanganisira Nia Jax.
Alexa Bliss ine hunhu hunomufadza kune vakawanda.
Nezvekuzvivaraidza kwake uye zvido zvake kunze kwekunetsana, Bliss anoda kuimba, kutarisa mafirimu, uye ari fan guru reHockey Hockey. Muchiedza chakafanana, iye achiri kuita maitiro kuenda kuDisney nyika sezvo ichivhiringidza kuyeuka kwehuduku hwake.
Alexa Bliss Chokwadi:
Bliss ndomumwe wevanoitisa trailblazers mumakadzi kurwisana nekuda kwekuti ndiye mukwikwidzi wekutanga kubata zita reSmackDown revakadzi kaviri, mukadzi wekutanga kuhwina Elimination Chamber match pakati pezvimwe zviitiko zvekumhanya-mhanya.
Ane mari inofungidzirwa inokwana $ 1.5 mamiriyoni uye ari kubhadharwa mari yegore ye $ 200,000.
Mune dzimwe nhepfenyuro, Bliss yakave yakaratidzwa mumitambo mitatu yeWWE yemavhidhiyo uye yakaita kuti ionekwe mumutambo weTV.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Alexa Bliss Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!